LM7805: wax walboo ku saabsan jaangooyaha danab | Qalabka bilaashka ah
LM7805: dhammaantiis oo ku saabsan jaangooyaha danab
El LM7805 waa xakamaynta danab, laakiin in aan lagu khaldin qeybiye danab taasoo aan horey uga soo hadalnay mid kale oo ka mid ah qormooyinkeenii hore. Intaa waxaa dheer, maahan kaliya wax xakameeya danab, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ay isticmaalaan kuwa sameeya iyo mashaariicda DIY ee dhammaan noocyada. Shaqadeeda, sida magaceeda ka muuqata, waa in la xakameeyo aaladda danab ee wareegga uu ku dhex jiro.
Qeyb aan had iyo jeer si wanaagsan loo qiimeynin iyo in, mararka qaarkood, lagu bixiyo mashruucyo badan. Laakiin taasi waa wax iska caadi ah muhiim ah haddii aad rabto signaalka danab deggan. Gaar ahaan muhiimaddu waa LM7805 marka la abuurayo wareegga korantada ee wareegyadeena. Tusaale ahaan, si loo abuuro koronto guri lagu sameeyo oo leh astaamo gaar ah, mid ka mid ah nidaamiyayaashani waa inuusan ka maqnaan.
1 Waa maxay jaangooyaha danabku?
2 Codsiyada jaangooyaha danab
3 7805: xoqitaan iyo xaashida xogta
3.1 Moodooyinka kale
3.2 Xagee laga iibsadaa
4 Isdhexgalka Arduino
Waa maxay jaangooyaha danabku?
Un danab ama jaangooyaha xakamaynta sida LM7805 waa aalad awood u leh inay wax ka beddesho signaarka danab waxay ku heshaa talooyinkeeda waxayna ku gaarsiisaa calaamado danab oo kala duwan soo saarkeeda. Soo saaristaas, danabku inta badan wuu hooseeyaa oo wuxuu leeyahay astaamo gaar ah oo looga baahan yahay in laga fogaado khataraha ama wareegga ay u quudineyso inuu si sax ah u shaqeeyo, haddii ay xasaasi u tahay kala duwanaanshaha danab.
Si tan loo suurtageliyo, jaangooyaha danabku wuxuu leeyahay wareeg gudaha ah oo leh taxaneyaal iska caabin ah iyo transistors laba-cirifoodka oo ku xidhan qaab taas oo u oggolaanaysa in si fiican loo habeeyo aaladda danab ee habka ugu habboon. Waxaad arki kartaa wareegga gudaha ee ku dhexjira xirmada qalabkan sawirka kore.
Movilideas 10 Cutub oo ...
Suuqa waxaa jira jaangooyooyin koronto badan oo kala duwanhaa, badankood waa kuwo jaban. Marka laga reebo LM7805 waxaad sidoo kale ka heli doontaa 7809, 7806, 7812, iwm, oo ka socda qoyska 78xx. Inkasta oo qodobkaan aan diirada ku saari doono 7805, isagoo ka mid ah kuwa ugu caansan.
La farqiga u dhexeeya xakamaynta danab iyo qaybiye xiisadu way cadahay. Kala qaybiyuhu wuxuu u qaybiyaa danab-soo-gelinta dhowr danab oo ka hooseeya wax-soo-saarkiisa, laakiin ma saxo calaamadda danab. Dhinaca kale, xakamaynta danab, danab la mid ah ayaa laga helaa wax soo saarka, laakiin calaamaddu aad ayey uga saxsan tahay tan laga helay wax-soo-saarkeeda.
Codsiyada jaangooyaha danab
Sidaad qiyaasi karto, IC sida LM7805 ayaa loo isticmaali karaa waxyaabo badan. Tusaale ahaan, qalabka korontada badiyaa waxay dhexgalaan mid ka mid ah taxanaha 78xx. Xaqiiqdii, korantada, sida aan ku sharaxnay maqaal hore, waxay ka kooban tahay dhowr marxaladood:
Transformer: waxaa suurtagal ah in loo beddelo danab gelinta 220v mid ku habboon 12, 6, 5, 3, 3.3 ama qiime kasta.
Hagaajinta buundada: markaa calaamaddaasi waxay lahaan doontaa danab ku habboon, laakiin waxay sii socon doontaa inay ahaato calaamadda beddelka ah, ka dib markay dhex marto buundadan calaamadda diidmada waa laga fogaanayaa.
Awood-bixiyeyaasha: hadda calaamaddu waxay leedahay qaab tuulmo ah, taasi waa in la yiraahdo, xoogaa danab ah oo xoog leh oo markii la dhex maro kaambarka la jilcinayo, iyadoo ku dhow khad toosan.
Jaangooyaha xiisadda: ugu dambeynti, jaangooyuhu wuxuu sifeyn doonaa calaamaddan si uu gebi ahaanba u noqdo mid deggan oo deggan, taas oo ah, inuu horay uga dhigto calaamadda hadda socota ee tooska ah.
Kuwa kale tusaalaha arjiga ee xakamaynta danab waxay ahaan laheyd inay quudiso wareegtooyin isku dhafan oo qaarkood oo aan lagu quudi karin calaamado dhaafaya tiro cayiman. Tusaale ahaan, qiyaasi shidma ama jibriil aan ka gudbi karin 3.3v oo awood ah. Hagaag, kiiskan, jaangooye ayaa loo isticmaali karaa si looga fogaado halista inuu dhaafo caqabaddaas. Dhammaan tamarta xad-dhaafka ah waxaa loo kala qaadaa sida kuleylka 78xx.
LM317: wax walboo ku saabsan jaangooyaha danab toosan ee la hagaajin karo
7805: xoqitaan iyo xaashida xogta
Waxaa jira soosaarayaasha kala duwan ee LM7805, sida STMicroelectronics, TI, Sparkfun, iwm. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka heli kartaa labadaba xirmadooda dhaqameed iyo qayb ka mid ah si aad u sahlanaato inaad la qabsato mashaariicdaada Arduino. Waxay kuxirantahay nooca aad iibsatay, waxaan kugula talinayaa inaad gasho bogga rasmiga ah ee soo saaraha si aad u hubiso sifooyinka ku jira waraaqo gaar ah loogu talagalay tusaalaha. Xusuusnow in kasta oo ay dhammaantood isku mid yihiin, ay jiri karaan xoogaa isbeddello ah oo soo saaraha shirkad kale u beddelo.
Haddii aad ku iibsato xirmada TO-220, waad heli doontaa 3-geesood ah. Iyaga ayaa la tiriyaa oo midka u dhigmaa soo gelinta danab ee aad rabto inaad wax ka beddesho, labada ama midka dhexe waa GND ama dhul (kan guud), sadarka saddexaad waxaa loogu talagalay soo saaridda danab horey u nidaamsanaa, taas oo ah, calaamadda xasilloon ee aan u adeegsan doonno bixinta wareegga xasaasiga ah ee aan dooneyno inaan ku shaqeyno. Laakiin waa inaad ku darto qaar siyaado ah sida kaabayaasha sida uu kugula taliyay soo saaraha si wax soo saarku ugu filnaado.
Marka laga hadlayo moduleka, way ka qaalisan tahay, laakiin waxay kuu fududayn kartaa waxyaabo badan. Waxaa ku jira aaladda 7805 iyo walxo kale oo adiga ah waxay fududeyn doonaan in lala isticmaalo Arduino. Uma baahnid qalab dheeri ah ama wax kale. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira kuleyl si loo ilaaliyo heerkulka saxda ah iyada oo la baabi'inayo kuleylka ay soo saartay 78xx iyo laba kaararka isku xirka ah ee loogu talagalay soo gelinta iyo soo saarista (Vcc iyo GND dhamaadka kasta), oo fududeynaya hirgelintiisa.
ka faraqa u dhexeeya noocyada kala duwan ee laga heli karo taxanaha 78xx xakamaynta danab waa wax fudud. Jaantuska la socda qoyskan wuxuu muujinayaa danab ugu sarreeya oo ay taageerayaan jaangooye kasta. Tusaale ahaan:
LM7805: 5v iyo 1A ama 1,5A xaaladaha qaarkood.
Haddii aad rabto inaad iibsato, waxaad ka heleysaa Amazon, marka lagu daro dukaamada elektaroonigga ah ee gaarka ah. Labada nooc ee aad iibsan karto waa:
Wax alaab ah lama helin. Xirmada TO-220 ee € 4 waxaad ka iibsan kartaa 10 qalabkan ah.
LM7805 ku jira qayb ka yar € 6 halkii cutub.
Sidaad aragtay, iyagu waa qalab quruxsan oo raqiis ah...
Hadaad ka fikirto la dhexgal mashruuc lala sameeyo Arduino ama Raspberry Pi ama nooc kale oo guddi ah, Ma jiraan wax dhibaato ah. Uma baahnid inaad isticmaasho maktabado gaar ah sida qaybaha kale, sidoo kale uma baahnid inaad ku darto lambar dheeraad ah Arduino IDE-gaaga, maaddaama 78xx-kan uu yahay mid iskiis u kooban oo si fudud loogu talagalay inuu wax ka beddelo aaladda korantada. Waa inaad haysataa oo keliya aqoonta korantada ee lagama maarmaanka u ah si aad u dhigto meesha saxda ah ee wareeggaaga ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » LM7805: dhammaantiis oo ku saabsan jaangooyaha danab
Pushbutton: sida loogu isticmaalo cunsurkan fudud Arduino
HC-SR04: Dhammaan wixii ku saabsan dareeraha ultrasonic